ပိုက်ဆံချေးထားသူဆီကနေ အမြန်ဆုံးပိုက်ဆံပြန်ရစေမယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး - CeleLove
ဒီလိုအချိန်ဆို လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလည်း သိပ်မရှိတော့ဘူး ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ပိုက်ဆံချေးထားတဲ့သူတွေဘာတွေ လိုက်ရှာပြီး အကြွေးတောင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေရပြီ။ အကြွေးတောင်းတယ်ဆိုတာကလည်း မလွယ်ဘူးနော်။ ကိုယ်က နည်းစနစ်ကျကျ တောင်းတတ်မှ။ မဟုတ်ရင် ပြန်ရဖို့က လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကဲ…ဒီတော့ နည်းစနစ်ကျကျ ဘယ်လိုအကွက်တွေသုံးကြမလဲ။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ နော် ….
(၁) သူ့ဆီမှာ ပိုက်ဆံရှိ၊မရှိ အရင်လေ့လာပါ ”
ချေးထားတဲ့သူဆီကနေ ပိုက်ဆံပြန်တောင်းဖို့ဆိုရင် အရေးကြီးဆုံးက သူ့ဆီမှာ ပိုက်ဆံ ရှိ၊မရှိကို အရင်စုံစမ်းဖို့ပါ။ သူ့ဆီမှာ ပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုရင် ကိုယ်က ပြန်တောင်းတာပဲ အဖတ်တင်ပြီး ပိုက်ဆံရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ အကြွေးတောင်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တောင် ပိုက်ဆံအနေအထားကို လေ့လာကြည့်ပါဦး။ သူ့မှာ ပိုက်ဆံတွေရှိနေပြီဆိုတာ သေချာတော့မှ လုပ်ငန်းစတာပေါ့ …။
(၂) တိုက်ရိုက်မပြောပါနဲ့ ”
တိုက်ရိုက်မပြောနဲ့ဆိုတာ အကြွေးတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုး ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုယ့်မှာ ပိုက်ဆံလိုတဲ့အကြောင်း၊ အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းတွေ သူ့ကိုသွယ်ဝိုက်ပြီး အသိပေးတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ လူတွေက အကြွေးတောင်းရင်သာ ပြန်ဆပ်ဖို့ စဉ်းစားကြတာဖြစ်ပေမယ့် တစ်ဖက်သား ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ ထင်မိရင်တော့ သူတို့ တတ်နိုင်တာလေးတွေ လုပ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ပိုက်ဆံကို တိုက်ရိုက်မတောင်းပဲ သင့်ရဲ့အဆင်မပြေတာလေးတွေသာ ပြောပြပါ။ သူ သင့်ကိုအကြွေးပြန်ဆပ်ဖို့ စဉ်းစားလာပါလိမ့်မယ် …။
(၃) ဖိအားမပေးပါနဲ့ ”
ဖိအားမပေးပါနဲ့။ အဲဒါကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အတင်းတွေ ဖိအားပေးပြီး အကြွေးတောင်းနေရင် သူက သင့်အကြွေးကို ပြန်မဆပ်ချင်တဲ့အပြင် သင့်ကိုပါ ရှောင်နေတော့မှာပါ။ ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပေးတို့၊ ဒီလထဲမှာ အပြီးပေးတို့ဆိုပြီး အတင်းဖိအားသွားပေးတဲ့အချိန်၊ သူ့မှာ ပိုက်ဆံမရှိတာနဲ့ ကြုံနေရင် သင်ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ …?
(၄) ဒေါသမကြီးပါနဲ့ ”
အကြွေးတောင်းလို့ရသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ ဒေါသမကြီးပါနဲ့။ အကြွေးမရလို့ သင် ဒေါသကြီးတယ်ဆိုရင်လည်း နှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးက ပျက်သွားတာပဲ အဖတ်တင်မှာပါ။ ဟိုဖက်ကလည်း သင်စိတ်ဆိုးတာကို ခံရတဲ့အတူတူတော့ အကြွေးမပေးတော့ဘူးဆိုပြီး စဉ်းစားကောင်း၊ စဉ်းစားမှာဖြစ်လို့ တတ်နိုင်သလောက် ဒေါသမကြီးတာမကောင်းဆုံးပါပဲ …။
(၅) မက်လုံးပေးပါ ”
မက်လုံးပေးတယ်ဆိုတာ သိလား။ “ငါ့ကိုအကြွေးပြန်ပေးရင် မင်းကို Hot Pot လိုက်ကျွေးမယ်” ဆိုတာမျိုး။ “မင်းအကြွေးဆပ်မယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ သွားသောက်ကြမယ်လေ” ဆိုတာမျိုးတွေက မက်လုံးပေးပြီး အကြွေးတောင်းတဲ့အကွက်တွေပါ။ သင်ရမယ့် အကြွေးပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး မက်လုံးပေးတဲ့ ပမာဏကို အတိုးအလျော့လုပ်သင့်ပါတယ် နော် … ။ ။
ပိုကျဆံခြေးထားသူဆီကနေ အမွနျဆုံးပိုကျဆံပွနျရစမေယျ့ နညျးလမျး(၅)မြိုး
ဒီလိုအခြိနျဆို လကျထဲမှာ ပိုကျဆံလညျး သိပျမရှိတော့ဘူး ။ ဒီတော့ ကိုယျ့ဆီမှာ ပိုကျဆံခြေးထားတဲ့သူတှဘောတှေ လိုကျရှာပွီး အကွှေးတောငျးဖို့ ပွငျဆငျနရေပွီ။ အကွှေးတောငျးတယျဆိုတာကလညျး မလှယျဘူးနျော။ ကိုယျက နညျးစနဈကကြ တောငျးတတျမှ။ မဟုတျရငျ ပွနျရဖို့က လှယျတာမဟုတျဘူး။ ကဲ…ဒီတော့ နညျးစနဈကကြ ဘယျလိုအကှကျတှသေုံးကွမလဲ။ ဒီနညျးလမျးလေးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ပါ နျော ….
(၁) သူ့ဆီမှာ ပိုကျဆံရှိ၊မရှိ အရငျလလေ့ာပါ ”
ခြေးထားတဲ့သူဆီကနေ ပိုကျဆံပွနျတောငျးဖို့ဆိုရငျ အရေးကွီးဆုံးက သူ့ဆီမှာ ပိုကျဆံ ရှိ၊မရှိကို အရငျစုံစမျးဖို့ပါ။ သူ့ဆီမှာ ပိုကျဆံမရှိဘူးဆိုရငျ ကိုယျက ပွနျတောငျးတာပဲ အဖတျတငျပွီး ပိုကျဆံရမှာမဟုတျဘူးလေ။ ဒီတော့ အကွှေးတောငျးမယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီးရငျတောငျ ပိုကျဆံအနအေထားကို လလေ့ာကွညျ့ပါဦး။ သူ့မှာ ပိုကျဆံတှရှေိနပွေီဆိုတာ သခြောတော့မှ လုပျငနျးစတာပေါ့ …။
(၂) တိုကျရိုကျမပွောပါနဲ့ ”
တိုကျရိုကျမပွောနဲ့ဆိုတာ အကွှေးတောငျးတဲ့ပုံစံမြိုး ပွောတာမဟုတျပဲနဲ့ ကိုယျ့မှာ ပိုကျဆံလိုတဲ့အကွောငျး၊ အဆငျမပွတေဲ့အကွောငျးတှေ သူ့ကိုသှယျဝိုကျပွီး အသိပေးတာမြိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ လူတှကေ အကွှေးတောငျးရငျသာ ပွနျဆပျဖို့ စဉျးစားကွတာဖွဈပမေယျ့ တဈဖကျသား ဒုက်ခရောကျနတေယျလို့ ထငျမိရငျတော့ သူတို့ တတျနိုငျတာလေးတှေ လုပျပေးတတျကွပါတယျ။ ဒီတော့ ပိုကျဆံကို တိုကျရိုကျမတောငျးပဲ သငျ့ရဲ့အဆငျမပွတောလေးတှသော ပွောပွပါ။ သူ သငျ့ကိုအကွှေးပွနျဆပျဖို့ စဉျးစားလာပါလိမျ့မယျ …။
(၃) ဖိအားမပေးပါနဲ့ ”
ဖိအားမပေးပါနဲ့။ အဲဒါကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ အတငျးတှေ ဖိအားပေးပွီး အကွှေးတောငျးနရေငျ သူက သငျ့အကွှေးကို ပွနျမဆပျခငျြတဲ့အပွငျ သငျ့ကိုပါ ရှောငျနတေော့မှာပါ။ ဘယျနနေ့ောကျဆုံးထားပွီးပေးတို့၊ ဒီလထဲမှာ အပွီးပေးတို့ဆိုပွီး အတငျးဖိအားသှားပေးတဲ့အခြိနျ၊ သူ့မှာ ပိုကျဆံမရှိတာနဲ့ ကွုံနရေငျ သငျဘာတတျနိုငျမှာလဲ …?
(၄) ဒေါသမကွီးပါနဲ့ ”
အကွှေးတောငျးလို့ရသညျဖွဈစေ၊ မရသညျဖွဈစေ ဒေါသမကွီးပါနဲ့။ အကွှေးမရလို့ သငျ ဒေါသကွီးတယျဆိုရငျလညျး နှဈယောကျကွားက ဆကျဆံရေးက ပကျြသှားတာပဲ အဖတျတငျမှာပါ။ ဟိုဖကျကလညျး သငျစိတျဆိုးတာကို ခံရတဲ့အတူတူတော့ အကွှေးမပေးတော့ဘူးဆိုပွီး စဉျးစားကောငျး၊ စဉျးစားမှာဖွဈလို့ တတျနိုငျသလောကျ ဒေါသမကွီးတာမကောငျးဆုံးပါပဲ …။
(၅) မကျလုံးပေးပါ ”
မကျလုံးပေးတယျဆိုတာ သိလား။ “ငါ့ကိုအကွှေးပွနျပေးရငျ မငျးကို Hot Pot လိုကျကြှေးမယျ” ဆိုတာမြိုး။ “မငျးအကွှေးဆပျမယျ့ပိုကျဆံနဲ့ သှားသောကျကွမယျလေ” ဆိုတာမြိုးတှကေ မကျလုံးပေးပွီး အကွှေးတောငျးတဲ့အကှကျတှပေါ။ သငျရမယျ့ အကွှေးပမာဏပျေါမူတညျပွီး မကျလုံးပေးတဲ့ ပမာဏကို အတိုးအလြော့လုပျသငျ့ပါတယျ နျော … ။ ။